Ogaden News Agency (ONA) – Ihaadhig oo Ku Fashilantay Ineey Soo Saarto Kaadir Bisil 24-kii Sanee Ay Talada Dalka Hayeen.
Ihaadhig oo Ku Fashilantay Ineey Soo Saarto Kaadir Bisil 24-kii Sanee Ay Talada Dalka Hayeen.
Posted by ONA Admin	/ November 11, 2015
ONA ayaa heshay warar sheegaya in Jabhada Ihaadhig (Wayaane) ay ku fashilantay ineey soo saarto kaadir tayo leh 24-kii sanee ay talada Itoobiya hayeen. Warkan ayaa intaas raacinaya ineey arintan soo sheec baxday kadib shirwaynihii TPLF ee dhawaan lagu qabtay magaalada Maqale oo khilaaf xoogani uu hadheeyay.
Jabhada TPLF ayaa xubno badan oo iskugu jira Gudi Fulin, Gole Dhexe & Kaadir badan ka caydhiyay jabhada kadib markay yaqiinsadeen taliska Ihaadhig ineeysan ku guulaysanin ineey dhisaan kaadir bisil oo ka caawin kara sidii ay xukunka u sii haysan la hayeen.
Xubnaha la caydhiyay ayaa waxay badankood ka hawlgali jireen magaalada Addiss Ababa. Madaxta TPLF ayaa waagu ku baryay kadib markii ay ururradii kalee ay isbahaysiga maqaar saarka ah ee EPRDF kuwada jireen sida Oromada & Axmaarada ay ka danaysteen dhabarkana usoo duween kooxda TPLF.
Madax kusheegta Wayaanaha ayaa go’ansaday ineey kala diraan dhamaan kadirkii Jabahada Ihaadhig si ay u qortaan xubno kaloo cusub oo booskii kuwii hore buuxiya oo ay ku shaqaysato. Arintan ayaa loo fasiray ineey TPLF doonayso ineey is abaabul & labo kaclayn horleh kutalaabsadaan. Sida ay wararku sheegayaan Jabhada Ihaadhig ayaa gabi ahaanba fashilantay taasoo ay horseedeen khilaafka gaamuray ee kooxda dhexdeeda kajiray sanadihii lasoo dhaafay.
Waxaa cad in u ururka TPLF doonayo in u cimri dherer ka dhigto oo u qorto dhalin yaro cusub oo u biriijka kaga gubo hasa yeeshee dadka arrimaha Itoobiya u dhuun duleelaa waxay sheegayaan in aysan maanta taasu suurto gal ahayn oo la ogaaday qorsheyowga ururka TPLF .